SomaliTalk.com » SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii XXII-aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Tuesday, March 27, 2012 // 2 Jawaabood
Sida aanu soo xusney habeenka uu bilowdey qorshihii weerarkii ku magacawnaa Fall Gelb (10/ 5- 1940-kii), isla-habeenkaas ayaa la doortey ra’iisul-wasaarihii cusbaa ee Ingiriiska Winston Chuechill. Saacado dabadeed wuxuu magacaabay xubnaha dowladdiisii, isaga oo isla-markaas saxiixey, ciidamada cirka ee Ingiriiska, marka ugu horeysa oo ay fursaddu u saamaxdo in ay si buuxda u duqeeyaan magaalo-madaxda Jarmalka Berliin si ay u bur-buriyaan awooddiisa. Jarmalka oo ahaa dowladda weerarka ahayd ayaa mashruucooda dagaal ee Fall Gelb, wuxuu ahaa mid uu ku doonayay in uu ku qabsado afar dal. Dabadeedna uu ku weeraro Ingiriiska. Saddex kamid ah afartii dal si fudud ayuu ku qabsadey, kadib markii uu ku qaaday dagaal u dhacay sidii biriqda oo kale (Lightining War), kaas oo uu kaga fogaanayay dagaal wakhti dheer qaata oo kharaj badan kaga baxa. Qorshahaas ayaa wuxuu u suurageliyay, muddo ayaamo ah in uu ku qabsado saddex kamid ah afartii dal ee uu weeraray. Iyagu waxay ahaayeen Luxembourg, Holand iyo Beljam.
Dowladaha xulufada ah si buuxda ayay ula socdeen ciidamada boqollaalka kun ahaa oo Jarmalku uu soo dhoobayay xudduuddahooda. Waxaa u caddaa in qorshaha ciidamadaas uu yahay dagaal dhul-boob ah oo uu ku doonayo in uu ku qabsado degaankooda. Beljamku waxay maleynayeen in weerarka hore uu qabsanayo Faransa iyo dhul-xeebeedka ay dhanka galbeed kala deriska tahay Ingiriiska. Waxaa kaloo ay maleynayeen, qorshaha dagaalka ee bilowga ah ciidanka cirka ee Jarmalka in ay xagga cirka ka duqeynayaan Ingiriiska. Faransiiska ayaa iyaguna waxay difaac adag dhigteen xuduudda dheer ee oo ay la wadaagaan Jarmalka. Sida aanu soo xusney dhismayaalka khadda Maginot Line ayaa wuxuu ahaa dhufeys sanooyin badan laga shaqeynayay. Ciidamada halkaas la dhigey waxay ahaayeen ….. . Waxaa weheliyay ciidan ka kooban saddex qeybood oo tekniko ah. Laakiin cilladda soo baxday ayaa waxay ahayd iyada oo dhererka khadda dhismayaalkan difaaca ah uu yahay 140 km. oo keliya. Islamarkaasna ma gaarsiisna xuduudda waqooyi ee u dhexeysa Farans iyo Beljam.
Waxaa kale oo difaaca Faransiiska raja-gelinayay dhulka cimiladiisu qallafsan tahay ee u dhexeeya labada dal. Taliyihii ciidamada Farans xilligaas Jeneraal Maurice Gamelin, iyo saraakiishiisii sar-sare waxaa ay qabeen in Jarmalku ay ku adkaaneyso weerarka uu ku soo qaadayo xuduudda u dhexeysa isaga iyo Faransiiska. Iyagu waxay filayeen, Howdka Ardennes (Ardennes Forest) in uu yahay caqabad hakineysa socodka taangiyada badan oo Jarmalku ay ku weerartamayaan. Howdkaasi waa dhul leh togag iyo taagag ah buuro dhaadheer, islamarkaana leh dhir badan oo keyn ah. Dhulkaas oo lagu magacaabo Howdka Ardennes (Ardennes Forest) waa dhul ballaaran oo u dhexeeya Faransa iyo Jarmal. Waxaa kaloo dhul-howdkaas uu gaarsiisan yahay xuduudda Jarmalku la leeyahay Luxembourg iyo Beljam.
Waxaa weheliyay difaaca dhanka waqooyi oo isugu jiray difaaca ciidamada Beljam ay dhulkooda ku leeyihiin iyo fariisimaha ciidamada Ingiriiska ay ku leeyihiin degmada Danshirk (Dunkirk) ee waqooyiga Faransa. Labadaas difaac (galbeed iyo waqooyi) ee ku weegaaran xuduudda Faransa galbeed iyo waqooyi ayaa waxay ahaayeen kuwa xoojinayay aragtida difaac oo saraakiisha Faransiisku ay ku magacaabeen (Dyle Plan). Habeenka uu bilowdey weerarka ay ku gacan-galeen waddamada saddexda ah eek u yaal galbeedka Jarmalka, isla-habeenkaas ayaa waxaa bilowdey weerarka uu ku qaaday dowladda Afaraad ee ahayd Faransa, taas oo ay Jarmalku wadaagaan xuduud ka dheer xudduudaha uu la leeyahay waddamadaas kale. Jarmalku wuxuu markiisii hore ku dadaaley in uu ka fogaado khasaaraha ka iman kara weerarka uu la beegsado difaaca adag ee galbeedka Faransiiska kaas oo uu u sii marayo dhul cimiladiisu ay qallafsan tahay. Sidaa darteed xoogga weerarkiisa wuxuu la beegsadey in uu legdan-boob ku qabsado dalka Beljam ee ku yaal xuduudda waqooyi ee Faransa, markaas dabadeed uu u soo tallaabo xuduudda waqooyi ee Faransiiska. Waxaa halkaas ku yaal saldhiggii ciidamada Ingiriiska ee degmada Dunkirk.
Jeneraal Maurice Gamelin oo ahaa taliyihii ciidamada Faransiiska, si buuxda ayuu u helayay ogaallada colaadda ay Jarmalku damacsanaayeen iyo qorshe-weerarkooda. Misana wuxuu go’aankiisu ahaa in uu sugto inta uu falku bilaabanayo si markaas uu u qaado tallaabada fal-celiska ah. Markii Jarmalku ay soo weerareen dalka Beljam ee ku yaal waqooyiga dalka Faransa, Jeneraal Maurice Gamelin, wuxuu bilaabay in uu xuduudda waqooyi ka howl-geliyo 40 qeybood oo ciidamo ah. Kuwaas oo ay ku jiraan ciidamadii Ingiriiska ee halkaas ku sugnaa BEF (British Expeditionary Force). Ciidankaas ayaa waxay markaas si buuxda uga mid noqdeen qorshihii difaaca ee Faransiiska (Dyle Plan).
Ciidamada Jarmalka, weeerarka ay Farnsiisku ku soo qaadeen wuxuu ka bilowdey waqooyiga oo ah dhanka xuduudda Beljam. Dhowrkii maalmood ee ugu horeeyey, weerarku wuxuu ahaa mid xooggan oo dhanka cirka ah. Dabadeed dayuuradaha Jarmalka waxay bilaabeen in ay bar-tilmaansadaan aagagga uu dagaalku ka socdo, gaar ahaan kuwa ay ku xoog badan yihiin ciidamada cagta ee Xulufada. Ujeeddadu waxay ahayd in ay kaalmeeyaan weerarka ciidamada Jarmalka. Dharbaaxooyin xooggan oo argagax badan ayaa Faransiiskii ku dhacay. Waxaa markaas xagga dhulka ka soo weerary ciidankii B ee Jarmalka ahaa ee uu hoggaaminayay Jeneraal Gerd von Rundstedt. Waxay markaas ka koobnaayeen 45 qeybood oo ciidan ah. Ciidamadii Faransiiska iyo Ingiriiska ee ku sugnaa xuduudda waqooyi, iyaga oo ka cabsi qaba in la hareereeyo ayay dib u gurteen. Maalinta uu weerarku bilowdey (10/ 5- 1940-kii) maantii xigtey, dagaalku wuxuu u soo tallaabay gudaha xuduuddii Faransa.
Ciidanka B ee Jarmalka, oo uu hoggaaminayay Jeneraal Fedor von Bock, waajibkoodu wuxuu ahaa in ay u soo tallaabaan dhulka uu maro webiga Meuse ee waqooyiga Faransa. Ciidankaas ayaa wuxuu ka koobnaa 29 qeybood oo saddex kamid ah ay tekniko ahaayeen. Waxaa la dirirayay ciidanka 1-aad iyo ciidanka 9-aad ee Faransa. Iyagu waxay daadsanaayeen dalka Beljam gudihiisa, gaar ahaan dhulka u dhexeeya degmada Wavre ee ku taal bartamaha iyo degmada Givet ee ku taal xuduudda Faransa. Difaacaas ayaa wuxuu ku jabay muddo ka gaaban intii la filayay inay ku jabaan. Kadib markii dagaalkii uu u soo dhaadhacay xuduudda Faransa gudaheeda, ayaa 13/ 5- 1940-kii, ciidamadii Faransiiska waxaa lagu dirqiyay in ay dhanka koonfureed uga tallaabaan webiga Meuse. Faransiisku waxay markaas bur-buriyeen dhamaan wixii kaabado ahaa oo looga tallaabayay webigan. Mid qura ayay reebeen oo ahayd kaabaddii ugu weyneed ee webigaas dul-marta. 60 km. ayay u jirtaa degmada xuduudda ku taal ee la yiraahdo Sedan. Ugu danbeyntii kaabaddan ayaa waxay ku dhacdey gacanta Jarmalka.
Dib u-gurashada ciidamada Faransiiska waxay sahashay taangiyadii Jarmalka in ay si nabad ah ugu soo qul-qulaan xuduudda Faransa. Ninka la yiraahdo Jeneraal Heinz Wilhelm Guderian, ayaa xilligaas ahaa taliyihii ciidanka taangiyada ee weerarka lagu galay. 14/ 5- 1940-kii, ciidamadii Nazi-ga waxay soo gaareen aagaggii hore fariisimihii ciidankii Ingiriiska ee BEF (British Expeditionary Force) ee fadhiyay degmada Danshirk (Dunkirk). Maantaas waxaa bilowdey dagaalkii ugu horeeyey ee labada ciidan ay isu food-saaraan Faransa gudaheeda. 17/ 5- 1940-kii Jarmalkii waxay qabsadeen magaalada Abbeville ee ku taal xeebta waqooyi-bari ee Faransiiska. Degmada Dunkirk inkasta oo ay tahay mid yar, misana sida aanu soo xusney ahmiyadda ay lahayd waxay tahay iyada oo ay fadhiyeen ciidamo tira-badan oo Ingiriis ah (EBF).
Jeneraal Charles de Gaulle wuxuu xilligaas hoggaaminayay qeyb kamid ah saddex qeybood oo ciidan ku dagaalamayay tekniko, kuwaas oo ka howl-galay waqooyiga Faransa. Isagu wuxuu ahaa sarkaalka keliya ee xilligaas Jarmalka ku soo qaadey weerar rogaal-celis ah. Isaga oo hor-kacaya 200 oo taangi ayuu 17/ 5- 1940-kii wuxuu weeraray kaabaddii weyneed ee ku tiil webigii laga qabsadey Faransiiska (Meuse River). Taangiyada uu Faransiisku ku dagaalamayay xilligaas (Char B-1 iyo Somua) waxay ahaayeen kuwo ka tayo wanaagsan kuwii uu Jarmalku watay (Panzerkampfwagen I iyo Panzerkampfwagen II). Sidaa darteed markii ay fool ka fool isaga hor-yimaadaan waxaa xoogganaa kuwa Fransiiska. Laakiin taangiyada Jarmalka waxay lahaayeen xagal-rogad iyo miriq-shaaleyn ka fudud kuwa Faransiiska. Waana ay ka tiro badnaayeen kuwa Faransiiska. Waxaa kaloo wiiqey taangiyadii Faransiiska weerar xagga cirka ah oo ay dayuuradihii Jarmalka ku soo qaadeen. Taasi waxay noqotey fursad haboon oo Jarmalku ay kaga saad-caleeyaan taangiyadii Faransiiska. Dagaalkii rogaal-celiska ahaa oo uu soo qaadey Jeneraal Charles de Gaulle waa uu ku jabay. Weerar taag-daran oo weliba wakhtigiisii ka soo dib-dhacay ayuu noqdey.
Xooggaas ciidamada xulufada ee ka kala socdey saddexda waddan, xiriirintooda waxaa odey ka ahaa sarkaal Faransiis ah oo la yiraahdo Jeneraal Gaston Billotte. Isagu wuxuu markaas ahaa taliyaha ciidanka 1-aad ee Faransa. Waa ciidanka fadhiyay xuduudda waqooyi. Waxaa xilkaas loo magacaabay 12/ 5- 1940-kii, markaas oo ahayd laba cisho dabadeed markii uu dagaalku ka bilowdey xuduudda. Iyada oo ayan jirin wax xafiis iyo shaqaale ah ee horey loogu tala-galay in ay arimahan ka shaqeeyaan, ayaa Jeneraal Gaston Billotte loo dhiibey xilkan. Weliba dagaalkii uu ka socdo gudaha Beljam iyo Faransa. Sidaa darteed markii jeneraalka loo dhiibey xilka, waa uu ilmeeyey. Jeneraal Gaston Billotte, niyad-xumidii uu xilka ku qabtay iyo xaaladdii adkeyd ayaa waxay sababtay in uu ku fashilmo gudashada xilkaas qallafsan. Gaar ahaan xiriirinta labada ciidan ee ah Ingiriiska iyo Beljamka. 18/ 5- 1940-kii Jeneraal Gaston Billotte isaga oo aad u niyad xun ayuu wuxuu la kulmey saraakiil Ingiriis ah oo uu kamid yahay taliyihii ciidanka Field Marshal Johm Vereker. Wuxuu ku yiri:
“ Anigu waan jajabnahay, mana garanaayo qaab looga hor-tago taangiyadan Jarmalka “. (Julian Jackson, The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940. Julian Jackson, Oxford 2003, p. 85-86, London – UK).
16/ 5- 1940-kii, iyada oo ciidamadii xulufada ay liitaan ayaa ra’iisul-wasaarihii Ingiriiska Winston Churchill, wuxuu u soo dhoofey dalka Beljam. Wuxuu la kulmey hoggaamaiyihii ciidamada Faransiiska ee aagga waqooyi Jeneraal Maurice Gamelin. Wuxuu su’aaley:
“ Meeye ciidankii keydka ee istraateejiyadda idiin ahaa “.
Jeneraal Maurice Gamelin wuxuu ku jawaabay:
“ Waxba kama joogaan “. (http://worldwar2database.com/html/france_40.htm).
Maantaas ayaa xilkii laga qaadey Jeneraal Maurice Gamelin. 19/ 5- 1940-kii waxaa ciidankii xulufada loo soo magacaabay taliye cusub oo qudhiisu u dhashay Faransa. Kaasi wuxuu ahaa Jeneraal Maxime Weygand. Isagu waxaa laga soo beddeley dalka Suuriya oo uu odey ka ahaa ciidamada Faransiiska ka joogey Bariga dhexe. Jeneraalkan oo billad-sharaf geesinimo ku qaatay dagaalkii I-aad, qudhiisu fursad uma helin in uu dalkiisa ka caabiyo ciidamadii Jarmalka. 20/ 5- 1940-kii oo ahayd markii saddex cisho ay ka soo wareegtey maalintii xilka loo dhiibey, ciidamadii Jarmalka waxay gaareen xeebta kanaalka lagu lamagacaabo (English Channel) ee ku yaal galbeedka Faransa. Jeneraalkii cusbaa wuxuu isku deyey in uu si dhakhso ah ku qaado dagaal rogaal-celis ah. Wuxuu ciidan xooggan la soo galay dhulkii howdka ahaa (Ardennes Forest). Dagaal laba cisho oo isku xigta socdey ayuu si xooggan ugu khasaarey. Dabadeed ciidamadii Jarmalka waxaa u suuragashay in ay hareereeyaan goobihii ay fadhiyeen xoogaggii xulufada ee waqooyiga iyo galbeedka Faransa. Generaal Maxime Weygand, wuxuu markaas bilaabay, wixii ka haray ciidamadiisii in uu ku urursho agagaarka webiga Somme River, halkaas oo muddo bil ah uu ka waday dagaal goos-goos ah illaa ay dowladdii Faransiiska si buuxda isu dhiibto.
Ra’iisul-wasaarihii Ingiriiska Winston Churchill, markii uu dalkiisii ku laabtay wuxuu aagga dagaalka u soo direy abaanduulihii guud ee ciidamada Ingiriiska Jeneraal Edmund Ironside. Ujeeddadu waxay ahayd in uu lana soo tashado saraakiisha aagga, isla-markaas uu soo qiimeeyo xaaladda dagaalka. 20/ 5- 1940-kii ayuu Jeneraal E. Ironside soo gaaray aaggii dagaalka. Ragga uu la kulmey waxaa kamid ahaa taliyihii ciidanka Ingiriiska Marshal Johm Vereker iyo xiriiriyihii ciidamada xulufada Jeneraal Gaston Billotte. Goor danbe Jeneraal E. Ironside, wuxuu ka waramaya niyad-jabka uu kala kulmey ciidankii uu booqdey. Isaga oo ka sheekeynaya kulankii uu la qaatay saraakiisha, wuxuu si gaar ah u tilmaamey niyad-jabkii uu ku sugnaa Jeneraalkii ka masuulka ahaa xiriirinta ciidamada.
“ Waxaan tegey iyada oo Jeneraal Billotte uu ku sugan yahay xaalad ay niyaddiisu si xooggan u hooseyso. Wax qorshe ah ma-jirin. Feker qorshena ma-jirin. Waxay u diyaar ahaayeen dhamaantood in la gowraco. Madaxa ayaa laga dhaawacay iyada oo aanan wax nabar ah la gaarsiin. …….. Waxaa halkaas igaga lumey farxaddii aan ku tegey “. (Julian Jackson, The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940. Julian Jackson, Oxford 2003, p. 86, London – UK).
Jeneraal Edmund Ironside, markuu xaaladdii arkey wuxuu xilkii kala wareegey taliyihii guud ee ciidamada xulufada Jeneraal Gaston Billotte. Wuxuu si deg-deg ah u hagaajiyay xiriirkii ciidamada. Dabadeed wuxuu hoggaamiyay weerar uu ku qaadey degmada Arras oo ku taal waqooyiga Faransa, taas oo gacanta ugu jirtay ciidankii A ee Jarmalka. Weerarkaas uu Jeneraal E. Ironside qaaday wuxuu ku doonayay in uu ku hakiyo socodka ciidamada Jarmalka ay ku doonayeen in ay soo gaaraan fariisimaha ciidamada Ingiriiska. Dagaalkan oo loo yaqaan (Battle of Arras) ayaa wuxuu yahay dagaalkii ugu waynaa oo ciidamada EBF ee Ingiriiska ay xilligaas isaga hor yimaadeen Jarmalka. Laba qeybood oo ciidanka cagta ah ayaa ka qeyb-galay (6-aad iyo 8-aad), kuwaas oo tiradoodu ay dhameyd 15,000 oo nin. Waxaa weheliyay qeybta 4-aad iyo qeybta 7-aad ee ciidamada taangiyada.
Dagaalkii uu qaaday Jeneraal Edmund Ironside, waa uu ku soo jabay. Sababtu waxay ahayd xoogga ay ku socdeen ciidamada Jarmalka iyo qalabka ay wateen ayaa waxay ahaayeen awood ayan xulufadu u babac dhigi karin. Waxaa horey u soo jabay ciidankii Faransiiska ahaa ee ka dagaalamayay howdka Ardennes. Dhowr jeer oo ciidankaas ay isku deyeen weerar rogaal-celis ah ayaa waxay kala kulmeen fashilaad. Ciidankii xulufada, jabkaas ka qabsadey labad aag waxay dhalisey in ay waqooyiga Faransa isugu yimaadaan ciidankii Jarmalka ahaa ee ka soo dagaalamay howdka Ardennes iyo kuwii ka dagaalamay Beljam. Sidaa darteed 20/ 5- 1940-kii, Jarmalku waxay kala jareen xiriirkii ay lahaayeen ciidamadii xulufada ee ku kala sugnaa Fransa iyo Beljam.
21/ 5- 1940-kii, saraakiishii ciidamada xulufada hoggaaminayay waxay isugu yimaadeen kulan. Meesha ay ku shireen waxay ahayd degmada Ypres ee ku taal koonfur-galbeed ee dalka Beljam. Jeneraal Gaston Billotte, wuxuu shirkaan ka qeyb-galey isaga oo ay ka muuqato cabsi badan. Markuu ka baxay shirkii, wuxuu galay shil gaari, kaas oo dhaawac ka soo gaaray uu la dhintey. Jeneraal Henry Pownall oo abaanduule u aha Jeneraal Edmund Ironside, wuxuu tilmaamey jeneraalka ka baxay xilligaas adag. Isagu wuxuu yiri sidaan:
“ Aniga oo aad u xushmeynaya, misana ma uusan ahayn nin aanu tebney xaaladda adag oo aanu ku jirney “. (Julian Jackson, The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940. Julian Jackson, Oxford 2003, p. 86, London – UK).
Maantaas uu kulanku dhacayo ciidankii 1-aad ee xulufada iyo ciidankii B ee Nazi-ga waxaa waqooyiga Faransa ku dhex-maray dagaallo mug wayn. Jarmalku waxay doonayeen in ay gaaraan degmada Dunshirk (Dunkirk) ee ku taal xeebta waqooyi-galbeed ee Faransa. Waxaa halkaas fadhiyay ciidanadii EBF ee Ingiriiska, kuwaas oo tiradoodu ay dhameyd 158.000 oo nin iyo qalabkoodii. Ciidankii Jarmalka waxay bar-tilmaameed ka dhigteen saldhiggan ay ciidamada Ingiriisku fadhiyaan. Waxay is-tusiyeen haddii uu ciidankan meesha ka baxo in markaas ay u sahal tahay in ay qabsadaan gebi ahaan dalka Faransa oo ay soo jeebiyeen dhamaan aagaggii difaaca ciidankeeda. Sidaa darteed ayaa markay taariikhd ahayd 24/ 5- 1940-kii, Hitler wuxuu soo booqdey magaalo ku taal waqooyiga Faransa ee la yiraahdo Charleville. Wuxuu halkaas kula kulmey taliyihii ciidamada Nazi-ga ah ee ka dirirayay aagga galbeed Jeneraal Gerd von Rundstedt. Wuxuu amar ku siiyay in ciidanka cagta B ay weeraraan fariisimaha ciidamada Ingiriiska ay ku leeyihiin degmada dekadda ah ee Dunkirk. Jeneraal Paul von Kleist oo hoggaaminayay ciidanka 1-aad ee taangiyada, ayaa isna waxaa la faray in uu weeraro dhanka galbeed ee dalka Faransa iyo koonfurta degmada Dunkirk. Si uu ugu khasbo ciidamada xulufada in ay dib u gurtaan intaaney ciidanka cagta B ee Jarmalka ayan soo gaarin fagaaraha lagu hardamayay. Kadib markii ciidamadii xulufada dib loo riixey, ciidankii Jarmalka waxay heleen fursad ah in ay isu urursadaan ciidamadooda kala baahsanaa. (History of World War II. By A.J. Taylor and S.L. Mayer 1974. p. 59).
2 Jawaabood " SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii XXII-aad "
Monday, April 9, 2012 at 8:38 pm
salaam kadib waxaan ku bogaadinayaa walaalkay Dr saadiq qoraaladiisa dhaxalgalka ah ee taariikhda la duugey ee soomaaloiyeed waxaan ku leeyahay u beddel buugaag ALLAAH MACAKA
ahmed ali faandho says:
Thursday, April 5, 2012 at 2:59 pm
asc. aad baad ugu mahadsan tihin somalitalk in aad noo soo gudbisaan barnamishayada saan oo kale aha waxan idin ka codsan laha hadad haysaan taariikhda somaliya oo dhamaysatiran dhirta xoolaha dhereerka wadanka inta goboladu isku jir jira inta gobol oo uu yahay adiga taariikhda oo dhamasatiran hadad haysaan mahadsanidiin